Fanitsiana lalàmpanorenana : misisika hanao amboletra irery ny mpitondra | NewsMada
Fanitsiana lalàmpanorenana : misisika hanao amboletra irery ny mpitondra
Na eo aza ny pesta, mbola adihevitra ny amin’ny fikasan’ny mpitondra hanitsy ny lalàmpanorenana. Misisika hanao amboletra irery izany…
Fampiakaram-peo izao. Fitompoana teny fantatra? “Nivoaka avy amin’ny fifidianana malalaka sy niraisan’ny rehetra ary madio ny filoha. Rariny raha mieritreritra fifidianana 2018 ny filoham-pirenena, raha mijery ny tokony hanohizantsika sy hametrahantsika endri-pifidianana tahaka izany”, hoy ny filoha Rajaonarimampianina tany Ihosy, ny faran’ny herinandro teo. Tsy niteny izy hoe tsy maintsy ny lazainy no lalana. Amin’ny maha raiamandreny azy, adidiny ny manome ny hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy firaisam-pirenena fa mety misy ny olana toy izao na izatsy.
“Diniho izany, ry olom-boafidy, firaisamonina sivily, fiangonana… Mila fampandrosoana isika”, hoy izy. Tokony hotazonintsika ny efa azontsika eo amin’ny fampanjariana ny fitoniana. Apetraka ny adihevitra. Aoka hatao ny maharesy lahatra. “Tsy misy tokony hibaiko antsika amin’izany, na avy aiza na avy aiza. Tsy tokony hisy hampihorohoro amin’izany ny eto an-toerana. Adihevitra malalaka no tokony hataontsika”, hoy ihany izy. Adihevitra tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan’ny firenena.
Efa hita ny vita sy ny natao
Tsy efa mandinika sy maneho ny heviny ve ny isan-tsehatra samihafa? Firaisamonina sivily, antoko politika, sendikà, ny iraisam-pirenena… Toa ny mpitondra irery sy ny mpomba azy sisa mikiry hanao amboletra. Mihevitra ny mpitondra fa hampisy fitoniana ny efa vitany toy ny hosoka sy hala-bato bevata tamin’ny fifidianana kaominaly sy ny fifidianana senatorialy?
Inona izao ny tena maharesy lahatra ny vahoaka amin’izao: fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana sa ny pesta, tsy fandriampahalemana, ny vidim-piainana, fandrobana tany… ?
Raha mba hanaovana adihevitra malalaka koa, ohatra, ny momba ny fitakiana ireo Nosy malagasy,? Tsy tokony hisy hatahorana na hibaiko antsika amin’izany. Vitan’ny mampiaka-peo ve ny raharaha? Na mitsamboaboatra, na mbola mieritreritra fa azo inoana amin’ny lazaina sy atao…